XOG :- Madaxweyne Biixi Oo Aqbalay Kala Diraysta Komishanka Doorashooyinka | Sanaagmedia — Warar Sugan
XOG :- Madaxweyne Biixi Oo Aqbalay Kala Diraysta Komishanka Doorashooyinka
Madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, ayaa ka soo dabcay mawqifkii uu ka taagnaa xubnaha Komishanka Doorashooyinka Qaranka ee lagu marunsan yahay kala diristooda ka dib culeysyo badan oo kaga yimi wadamada Somaliland ka taageera hannaanka dimuqraadiyadda iyo oorashooyinka, waxaana la sheegay in ay ku goodiyeen in aanay aqbali karin dib u dhac ku yimaadda Doorashooyinka Dalka.
Xogo Wargeyska Waaberi ka helayo qasriga Madaxtooyada Somaliland, ayaa sheegaya in diblomaasiyiinta caalamku ay cadaadis ku saarayaan Madaxweynaha in aanay Doorashadu dhaafin 2019ka isla mar ahaantaana wakhtigan uu Madaxweyne Biixi u muuqdo in uu ka tanaasulaayo mawqifkiisii uu ka tagnaa kala dirista xubnaha Komishanka Doorashooyinka Somaliland.
Xogaha ayaa tilmaamaya in Madaxweyne Biixi uu ku qancay kala dirista xubnaha Komishanka Doorashooyinka isla mar ahaantaana uu wakhti xaadirkan la sugaayo saddex xubnood oo xubnaha Komishanka Doorashooyinka kaga maqan dalka dibaddiisa kuwaasi oo kala ah Afhayeenkii Komishanka Doorashooyinka Siciid Cali Muuse, Komishaneer. Cabdifataax Ibraahim Xasan iyo Komisheneer Maxamed Jaamac Maxamed. Waxaana ay wararkani xusayaan in gudaha bisha Labaad ee sannadkan si deg-deg ah loo soo magacaabi doono xubnaha cusub ee Komishanka Doorashooyinka.
Dhinaca kale, diblomaasiyiin uu la xidhiidhay Wargeyska Waaberi , ayaa xaqiijiyey in beesha Caalamku ay si deg-deg ah u soo saarayso qoraalo ay ku caddeynayaan mawqifkooda la xidhiidha arrimaha Doorashooyinka iyo weli ba sida oo kale qodobo ay ku dhex-dhexaadinayaan Xisbiyada Qaranka. Iyada oo caalamku uu aad u daneynaayo in Doorashadu qabsoonto 2019ka.
Xisbiga mucaaradka ah ee WADDANI ayaa bishii Maarij ee sanadkii hore kalsoonida kala noqday guddida doorashada, islamarkaana sheegay in aanu xisbigu galayn doorasho ay guddidaasi qabanayso halka madaxweyne Biixi iyo xisbigiisu si adag u difaaceen kuna sheegeen guddi doorasho fiican qabatay oo abaal marin istaahisha.
Muranka siyaasadeed ee kala dirista guddida ayaa ka mid ah ahaa caqabadaha waaweyn ee hor taaggan doorashooyinka baarlamaanka iyo goleyaasha degaanka oo qorshaysna bisha Maarij ee sanadkan laakiin, golaha wakiillada loo kordhiyay ilaa dhammaadka sanadka halka la hadal hayo in goleyaasha degaanka la kala dirayo.